Askareynta carruurta Koonfurta Suudaan - BBC Somali
Askareynta carruurta Koonfurta Suudaan
Hay'adda 'Save the Children' ayaa sheegeysa inay tahay wax laga naxo warbixinada dilka, kufsiga iyo afduubka carruurta dalka Koonfurta Suudaan.
Waxay sheegtay in kooxaha hubeysan ay wadaan inay askareeyaan carruurta gobolka galbeedka Niilka sare, halkaasi uu ka jiray dagaal xooggan. Wiilal yar yar ayaa lagu warramayaa inay ku luglahaayeen dilka dad rayid ah.
Gabdho todoba jiro ah ayaa la sheegay in la kufsaday oo la dilay. Kooxo badan oo gargaarka ah ayaa ka baxay goobaha uu dagaalku saameeyay ee Koonfurta Suudaan oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo falaagada.